VBA Microstation: Abuuri Khariidadda xaddidan - Geofumadas
VBA Microstation: Soo saar khariidad xaddidan
Luulyo, 2010 cadastre, Microstation-Bentley
Maalmo yar ka hor waxay muujisay sida loo abuuro daabacaan muuqaalada adoo isticmaalaya Microstation. Kahor doorashadan xakamaynta xaashida iyo moodooyinka, waxay ahayd lagama maarmaan in la sameeyo qadiimaadyo iyagoo soo saaraya unugyo (unugyo) iyo sameynta sharraxaadda.
Laga soo bilaabo daqiiqaddayda sabbatical, tusaalaha aan ku tuso munaasabadan waa codsi la sameeyey Visual Basic ee Microstation, oo ah khariidad xaddidan oo la soo saaray, ama shahaado caddayn qaar ka mid ah. Hagaajinta waaxda cadastarada, oo ah inay soo saaraan khariidad ku saabsan codsiga, miisaanka, adeegga ay ku soo dallacayaan, laakiin haddii aan la jarin waqti badan.
Ante wuxuu lahaa fiidiyow inaan si ku-meel-gaar ah u saari doono, laakiin ujeedada waxbarashada halkan waxaan ka tagayaa sida loo sameeyay oo loo habeeyay.
Dgn, oo ku xiran heerka beerta
Macluumaad Dheeraad ah, kaas oo ku jira qaybta degaanka, wareegga iyo iskudhafyada kala duwan. Kadibna waxay ku biirtay xog ururin kale oo leh magacyada canshuur bixiyeyaasha (dadka), laga bilaabo furaha cadawga.
Faylka .cel oo ka kooban unug maskaxeed (block), oo leh cabbirka 1: 100, calaamadda waqooyiga iyo nooduusyada si ay xog uga helaan xogta database. Tani waa in la geliyaa meesha maktabadaha diiwaangashan lagu kaydiyo (goobta shaqada / qaabeynta / unugyada)
Foomka VBA qaabka qabashada waxaa lagu sameeyay qaab maskada sida waafaqsan xeerka cadastu ee degmada oo isticmaali doonta. Waxay leedahay meel bannaan oo lagu daro indho-indheyn iyo doorashooyin si markaa loo geli karo sharaxaad magacyada milkiilayaasha, furayaasha cadawga ama lambarka hantida kaliya.
Sida loo ordo.
Marka dabeecadaha la cayimay, badhanka "shahaadada" waa la cadaadiyaa, nidaamkuna wuxuu sameeyaa hawlo caadi ah oo la qaban doono manfacyada haddii aan la helin codsiga.
Tan iyo markii la fuliyay faylka cusub (shaqada), nidaamku wuxuu qabtaa waxyaabahan soo socda:
Khariidadda la tixraacey waxaa loola jeedaa khariidada xuduudaha leh ee ay ku jiraan sawirka
Xisaabi inta u dhaxaysa iskudhafyada ku jira sawirka, si loo dhiso miisaanka ku habboon
Ka dibna samee xayndaabka hareeraha guriga, oo leh qiyaasta le'eg lixda so, sidaa darteed uma baahnid inaad la shaqeysid khariidadda oo dhan
Kadibna wuxuu sameeyaa a clip oo ay ku jiraan lakabyada lagama maarmaanka ah, dhisidda xuduudaha, dhisidda nambarada, xuduudaha blockska iyo magacyada wadooyinka. In habkan, tusaale ahaan qalliinka waa waqti lumis maxaa yeelay, shuruudaha topological aysan si fiican u haboon maps kuwan, halkii la xiriirinaya centroid lala xuduudaha, qasabtay inuu sameeyo wareejinta shukaansiga ku laayeen in ka centroid iyo xaqiiqda ah maareynta khariidad kaliya halkii ay ka muuqan lahayd aaladaha ama faylasha "stadtant" waxay keeneysaa falanqaynta falanqaynta.
Ka dibna wuxuu xisaabiyaa miisaanka, samaynta tixraac ku saabsan xajmiga xajmiga (miisaanka) 1: 100 si loo ogaado haddii ay ku jirtey in ay ka dhigto mid weyn ama ka yar kuna meeleeysa unugyada.
Ka dibna u samee xayndaabka shaxda waxa ku jira khariidadda xuduudda leh, oo gooyay dheellitirka.
Waxaa aan u leeyihiin, shahaado cadastral ah, taas oo module xogta la geliyo sida hay'adda fulinta mashruuca, logo ah ee degmada, meesha fakaray, baaxadda, tiro caleen iyo sharaxaad ayaa tilmaamaya.
Xaashida labaad, waxay soo saartaa isuduwaha saldhigyada kala duwan, masaafooyinka iyo tilmaamaha lagu soo saaro duulimaadka ka yimid deyr gudaha ah oo ku yaala guriga, iyadoo la dhigayo dhibic iyo lambar taxadar leh oo ah jihada saacadda laga helo. in ka badan galbeedka. Haddii ay lagama maarmaan tahay, sababtoo ah guluubku wuxuu leeyahay geeso badan, wuxuu abuuraa caleemada loo baahan yahay.
Xaaladaha xad-dhaafka ah, qulqulka oo aad u dhow, oo ku xiga darbi aad u ballaadhan, ka dibna xulashooyinka ayaa loo abuuray si loo xoojiyo miisaanka xiga ama abuuro xaddiga 1: 125 kaas oo nidaamka lagu xisaabiyo. Xaaladda tusaale ahaan waxay u baahan tahay inaad sidan ku sameyso isaga, tan iyo markii aad aragto in dhinacyada isgoysyada kale ee wadada ah aysan u soo bixin miisaanka.
Codsiga wuxuu ka shaqeeyaa Microstation Geographics V8, inkasta oo waqti ka dib la sameeyay tan iyo kun kiilo kale oo geedi-socodkaas ah oo maalin uun ah ayaan rajeynayaa inaan ka hadlo.
Post Previous«Previous Xagee laga iibsadaa Printerka Brother
Post Next Saliidda ugu horeysa ee gabadhaNext »
3 Jawaab "VBA Microstation: Soo saar khariirad xaddidan"
Looma hayo soo dejinta. Laakiin hadaad nala soo xiriirto, waxaan ku waafajin karnaa baahiyahaaga.
Ma ii sheegi kartaa meesha aan ka iibsan karo makro? iyo udubdhexaadka ah ee fadlan? Mug leh, mahadsanid dareenka.
Ciriiri isagu wuxuu leeyahay:
Waxay iga dhigeysaa in ay ahayd madax xanuun aan jeclahay in aan awood u yeesho inuu ka tago khariidadda xaddidan saxda saxda ah ee habka wanaagsan ee jajajjaja